Hogaamiyeyaasha Ururada Saxaafadda Somalia oo ka hadlay guusha Suxufiyiinta Nairobi +Sawiro
Monday July 05, 2010 - 05:42:43 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Mogadishu 12 Setember 2009
Gudoomiyaha Ururka dhaqdhaqaaqa Saxaafadda Haweenka Somalia ee WAJO Marwo Fardowsa Sheekh Hassan Kuuriya ayaa hambalyo u dirtay Gudoomiyaha cusub ee ku guuleeystay doorashadii Weriyeyaasha qurba jooga sida dimoqoraadigaa ugu qabsadeen Nairobi.
"Waxaan hambalyo u dirayaa Gudoomiyaha cusub ee Mohamed Siidii,waxaana gabdhaha Saxaafadda Somalia dhamaan ugu baaqayaa inay taageero hiil iyo hoo leh la garab istaagaan ,si loo adkeeyo midnimada Suxufiyiinta Soomaaliyeed"ayey tiri Fardowsa Kuuriya.
Gudoomiyaha Ururka isu taga Suxufiyiinta Somalia ee ASOJ Dahir Abdulle Alasow ayaa doorashadii Weriyeyaasha ku qabteen Kenya ku sifeeyay mid taariikhiya,wuxuuna hambalyo u diray hogaamiyaha ay doorteen ee Mohamed Siidii.
"Markaan daawaday sawirada,la sheekeeystay Weriyeyaashii ka qeybgalay doorashada,waxay igu beertay farxad,hada waxaan dareemayaa in Warfidiyeenada Somalia ka gudbeen is naceybkii ka dhaxeeyay,waxaan ka marakacayaa in la qaaday tilaabo wax ku oola,waana mid taariikhda gashay"ayuu yiri Dahir Alasow.
Dahir Abdulle Alasow,wuxuu bogaadiyay dhamaan Weriyeyaashii ka qeybgalay doorashada.
"Somalida waxay ku maahmaahdaa,kuu sheekeeye,kaa sheekeeye hala sheekeeysan,waxaa caqli daran qofkii ku fikiraya inuu boobo xaqooda 82 Weriye ee sida quruxda badan isugu tegay kalsan ,codkooda u dhiibtay hanaan dimoqoradiya,waxaan doorashada dhacday ku ogaanay shaqsiyaadka hagar daamada ku hayay horumarka Saxaafadda,waxaana xusid mudan inay 11 Setember kadib noqon doonaan duko cambaar leh,oo ku horkufay Saxaafada madaxa banaan"ayuu ku celcelshay Dahir Alasow.
Dahir Abdulle Alasow wuxuu qeybaha Warbaahinta ugu baaqay inay ka feejignaadaan beenta qoowleeysatada Saxaafadda ee ka naxsan isku duubnida Weriyeyaasha gaareen.
" Website-yada qaar ayaan ku arkay warar lagu qoray oo aan ka daba tegay shaqsiyaadka soo gudbiyay,toloow miyey u dhiman tahay ceeb,hadii la faafiyay muuqaalkii doorashada iyadoo aan loo kala harin,ma waxay gaareen guul mise waxay meel kaga dhaceen magacooda,kan Website-yadii ay beenta u direen,walaahi waxaan oran karaa,kaarkooda ayey iska gubeen,waxayna u tahay ceeb iyo xishood daro"ayuu Dahir Alasow ku koobay hadalkiisa.
Gudoomiyaha Ururka u dooda xaquuqda Weriyeyaasha Soomaaliyeed ee SOJRA Daa'uud Abdi Daa'uud ayaa dhambaal Hambalyaa wuxuu Warbaahinta u marsiiyay Gudoomiyaha cusub ee Saxaafadda Mohamed Siidii,wuxuuna kula taliyay inuu si feejigan u soo dhiso,xubno wax ku oola,si hoowlahii loo igmaday loo guda galo
" Ma jirto farxad iiga weeyn,inaan goobjoog u noqdo,Weriyeyaasha Somalia oo si mida codkooda u dhiibanaa iyo buuq la'aan laba musharax oo ay u kala codeeynayaan,waa dhacdo xasuus mudan,waa tusaale wanaagsan,oo in la raadraaca mudan"ayuu yiri Daa'uud Abdi Daa'uud.
Daa'uud wuxuu ayaan daro ku tilmaamay in qoowleeysatadii saxaafadda markii laga tashaday ay laaluush siisay gabadha Universal uga soo waranto Kenya si aysan u baahin warka doorashada.
" Universal Tv hadii aan nahay bahda Saxaafadda Somalia dacwad ayaanu ka nahay,waxaana hubaa inuusan sii shaqeeyn karin laaluush"ayuu yiri Daa'uud Abdi Daa'uud.
Mohamed osman Sheekh Qadaafi oo ah Xoghayaha xiriirka bulshada ee Ururka ASOJ ayaa isagana hambalyo gaara u diray Mohamed Siidii,oo ay bahda saxaafadda isku mar soo wada galeen.
"Waa masuul u qalmo xilka loo igmaday,waa shaqsi ku caama cadaalada,aniga aqoon badan ayaan u leeyahay,isku maalina imtixaanka ayaan wada galnay,waxaan saaxiibkeey Siidii u rajeeynayaa guul iyo xil gudasho wanaagsan"ayuu ku koobay hadalkiisa Weriye Qadaafi.
Doorashada ka dhacday Kenya ee Weriyeyaasha Soomaaliyeed ku sameeysteen hogaanka waxay suuqa ka saartay shaqsiyaadkii doonayay inay magaca Suxufiyiinta u adeegsadaan qaab NGO,waxaana tani ay ka turjumee sida Saxaafadda Somalia uga gudubtay been iyo qiyaano mudo lagu maaweelin jiray.